မောင်စွမ်းရည် – “အဖိုးနဲ့မြေး” | MoeMaKa Burmese News & Media
မောင်စွမ်းရည် – “အဖိုးနဲ့မြေး”
ခတ်ဟယ်၊ ခတ်ဟယ်၊ ခတ်ဟယ်!
ကိုးပွင့် ဆယ်ပွင့်၊ ပွင့်ပြီးမီးစွဲ
ရဲကနဲ တောက်၊ မီးတောက် ဖြစ်ကရော။
နေရောင်ဖြတ်စေ၊ ဖြတ်စေ၊ ဖြတ်စေ!
ဟုပ်ကနဲ မီးစွဲ၊ ရဲကနဲမီးတောက်
ဖျတ်ကနဲ ဝင်းလက်၊ တချက်ပါပဲ
အဖိုး … လက်ခုပ်တီးပါဗျို့ တဲ့။
အင်း၊ ဒီခေတ်ကြီးက၊ မီးရှို့ရတာ တယ်လွယ်တာကိုး။
(၁၂ မေ ၂၀၁၂)